YÖYKEMသံမဏိ Group ကုမ္ပဏီလီမိတက်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု
Gungoren Mah ။ Boulevard ozallan Turgut ။ အဘယ်သူမျှမ:4ခ
Taşdelen / Cekmekoy / အစ္စတန်ဘူလ်
လူအုပ်စု +90,532,794 49 53
Tel / ဖက်စ်: +90 (216) 312 98 53
Skype ကို: yoykem
အဆိုပါဘောင်နှစ်ခုတင်းကျပ်ပြားနဲ့အလင်းသတ္တုသားညှပ်ပေါင်မုပြားအကြား insulator တွင်လည်းတစ်အလွှာ၏ ?? ထားလျက်ရှိ၏။ Sheet များရှိနိုင်ပါသည်, ဤ Sheet များလူမီနီယမ်, သွပ်ရည်စိမ်စတီး, သစ်သားသို့မဟုတ် PVC စာရွက်များ။ ဒီပစ္စည်းကိုလက်ျာသုံး Prefabrication အဆောက်အဦများ, စက်မှုဇုန်ဝုဏ်အပေါ်အလွန်ကိုအထူးဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ပါသည်, အားလုံးမျိုးဖွဲ့စည်းပုံမှာအတွက်အားကစား Complex အပူလျှပ်ကာ, ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ပြီးမြင့်မားသောအဆင့်မှာကောင်းသော insulator တွင်လည်းအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
စင်ကြယ်သော ROOM တွင် Panel ကို: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်စနစ်တွေများအတွက် turnkey ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်နှင့်သန့်ရှင်းသောအခန်းကဒီကဏ္ဍအတွက်၎င်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအနေအထားစောင့်ရှောက်။ စင်ကြယ်သောအခန်းလိုအပ်ချက်များအတွင်း
Tasy Panel ကို: perforated ခေါင်မိုးပြား၏သတ္တုအခွံအတွင်း tasy (porous), စံပုံစံကိုအကြားအပါအဝင်အခြားသတ္တုဃ S ကိုမျက်နှာပြင်? 50-60-80-100-120-150 သို့မဟုတ် 200 မီလီမီတာအထူ insulator တွင်လည်း tasy ဖြစ်ပါတယ်။
Polyurethane Panel ကို: Polyurethane ပွညျ့ခေါင်မိုးနှင့်မျက်နှာစာစနစ်များ။ Polyurethane ပွညျ့ခေါင်မိုးနှင့်မြို့ရိုးကိုပြားအဆောက်အဦများအမြိုးမြိုးအတှကျသငျ့လျြောသောဖြစ်ကြသည်။ polyurethane မီးလျှံနှင့်အတူ Panel များYürütmez..4Cmအကြား 20cm ထူထူအသီးအနှံ ..
YÖYKEMသံ Steel တည်ဆောက်နေ - ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Duzce Kars မှYöyke PANEL တူရကီစတင်ခဲ့ပြီးယနေ့အစ္စတန်ဘူလ်ဗဟို Edirne Be သော 2002 ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုသားညှပ်ပေါင်မု panel ကိုအရောင်းနှင့်အောင်မြင်မှု၏ညီလာခံပြပွဲအတွက် 1000 ကျော်ရောက်ရှိစီမံကိန်းများကိုသဘောပေါက်, "ငါ့သားညှပ်ပေါင်မုပြားYöyke" ၏ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ထိုသို့အ panel ကိုရောင်းချသူ။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, ရိုးသားမှု, အရည်အသွေးပစ္စည်းများ, တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော 10 နှစ်, ကုမ္ပဏီအကဏ္ဍတွင်ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
sandwcih PANEL ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, တူရကီအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ "Yöyke panel က" သားညှပ်ပေါင်မုပြားနှင့်စတီးအမိုးဆောက်လုပ်ရေးဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, အရောင်း, ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, တန်ဖိုးဖြတ်မရသော 10 နှစ်, ကုမ္ပဏီအကဏ္ဍတွင် လုပ်. ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုလမ်းကြောင်း, ကျနော်တို့ကုန်သည်တည်ငြိမ်သောဖြစ်ကြောင်းစက်ရုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်ခေတ်မီအလိုအလျောက်စက်၏ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်, အရည်အသွေးမြင့်သားညှပ်ပေါင်မုပြားထုတ်လုပ်ရန်။
ယခုနှစ် 2012 ခုနှစ်, သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး, သံမဏိခေါင်မိုး, ဂိုဒေါင်, စက်ရုံအဆောက်အဦး, ကြက်သားကြက်, မှို Tank, အေး Depso, အားကစားအဆောက်အဦ, ကော်ဇော, သံလွင် Depot မှစ. Yöykemငါခေါင်မိုးနှင့်မျက်နှာစာစနစ်များ, တပ်ဦး Coating ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဖောက်သည်န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် panel က screw နှစ်ခု, ခန်းမ Sandwich က panel ကို Sandwich က Panel ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Sandwich, အစိတ်အပိုင်းများကိုသငျသညျကယ်မနှုတ်နိုင် Panel ကို, Sandwich က Panel ကို Fittings ကျွန်တော်တို့ကို Sandwich ။
စင်ကြယ်သော ROOM တွင် Panel များ
Yöyke Panel ကို Co. , ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့နှင့်ကြံ့ခိုင်ပျားလပို့ကိုထရံကိုပြား, စင်ကြယ်သောအခန်းနှင့်သန့်ရှင်းသောအခန်းမျက်နှာကျက်ပြား၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေးစွမ်းသည်။ ဒီပေါ့ပါးပြီး, အားကြီးသော cleanroom မြို့ရိုးကိုပြားများနှင့်မျက်နှာကျက်ပြားစင်ကြယ်သော "ဆဲလ်အရွယ်အစား, တစ်ဦး thermo epoxy ကော်¾လူမီနီယံအလွှာ၏ဖွဲ့စည်းစီးပွားဖြစ်တန်းလူမီနီယမ်ပျားလပို့ core ကို။
စံလူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြားနှင့်သန့်ရှင်းသောအခန်း 4'x 12 '' 4'x 10 4'x အ 8. ကျွန်တော်တို့ဟာလူမီနီယံမျက်နှာကျက်ပြားသန့်ရှင်းသောအခန်းအပြည့်အဝ panel ကိုအရွယ်အစားကိုပေးဆောင်မရှိအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာချသည်။ ဖြတ်သန်း cleanroom မျက်နှာကျက်ပြားတစ်လူမီနီယံဝန်နှင့် deflecton နဲ data တွေကိုစာရွက်နှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုကြသည်။ အထူးလူမီနီယမ် panel ကိုကျယ်ပြန့်နှင့် 20 ကြာမြင့်စွာငါးရှည်လျား, ဒါမှမဟုတ်4"ကျယ်ပြန့်နဲ့ 30" အတှကျအသုံးပွုနိုငျအရွယ်အစား။ စံ၏¼လူမီနီယမ် panel ကိုအထူ ", ½" 1 ", 1 ¾" နှင့် 1 7/8 "။ အခြားအထူတောင်းဆိုမှုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 0,032 ၏စံလူမီနီယံဝတ်ထူ (0.025, 0,040, ရရှိနိုင် 0.063) ဃ။ မဖြစ်မီနှင့်ပြီးနောက် လူမီနီယမ်အမှုန့်၏မျက်နှာကိုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနဲ့ဖုံးလွှမ်းကိုဖုံးလွှမ်းသို့မဟုတ်လိပ်နိုင်ပါတယ် Frontend Non-ကူးမှုသုံးနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် electrostatic လွန်ကျူးဖြစ်စံအရောင်များ: ။ ။ ။ အရောင်အသွေးစုံအဖြူ, ဒီဇိုင်နာအဖြူရောင်နှင့်ရှဲလ်တို့ပါဝင်သည်အခြားအရောင်များ, volume ကိုပေါ် မူတည်. နှင့်ဦးဆောင်လမ်းပြအချိန်လိုအပ်ချက် mevcuttur.pacific ပြားလေဟာနယ်ဖြစ်စဉ်စောင့်ရှောက်မှု processing ကာလအတွင်းကိုဖယ်ရှားအားလုံးသည် volatile organic, ပျားလပို့ပြား။ နောက်ဆုံး panel က keypad အစိတ်အပိုင်းများဓာတ်ငွေ့ထွက်ပေါက်ကနေဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ရှေ့နှင့်နောက်ကျောမကျြနှာကိုဖုံးလွှမ်းမှုန့သို့မဟုတ်လိပ်ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနဲ့ဖုံးလွှမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ Frontend Non-ကူးမှုသို့မဟုတ် Electro-static နဲ့လွန်ကျူးဖြစ်သုံးနိုင်ပါသည်။ စံအရောင်များ: အရောင်အသွေးစုံအဖြူ, ဒီဇိုင်နာအဖြူရောင်နှင့်ရှဲလ်ပါဝင်သည်။ အခြားအရောင်များကို volume ကိုနှင့်ခဲအချိန်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးရရှိနိုင်ကြသည်။
Yöykem panel ကို Inc က လူမီနီယမ် panel ကို Bond လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည် volatile organic ဒြပ်ပေါင်းများ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာစိတ်ချပါကိုဖယ်ရှားလူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြား။ အချောလူမီနီယမ် panel ကိုအစိတ်အပိုင်းစမ်းသပ် panel ကိုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက်ပေါက်ရှိတယ်။
Yöykem panel ကိုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နှင့်တင်းကျပ်ပျားလပို့ပြားများအတွက် display ကိုအလင်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း။ ဒီပေါ့ပါးပြီး, အားကြီးသောပြားလူမီနီယံအင်္ကျီနှင့်အတူကပ်လျက်တည်ရှိတစ် thermosetting epoxy ကော်စီးပွားဖြစ်တန်းလူမီနီယမ်ပျားလပို့ core ကို၏ရေးစပ်ကြသည်။
စံပြား "။ မိမိစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားမှ6အထိရရှိနိုင်ပါသည်ရှည်လျား '' ကျယ်ပြန့်နှင့် 14 မှမည်သည့်အရှည်တက်" ကျယ်ပြန့် 48 နှင့် 20 "ရှည်လျားသို့မဟုတ် 4" ကျယ်ပြန့်နဲ့ 30 "ရှည်လျား။ ၏¼စံ panel ကိုအထူ", ½ ",3/4", 1", 1 ¾ "နှင့် 1 7/8" ။ အခြားအထူတောင်းဆိုမှုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
မဖြစ်မီနှင့်အမှုန့်-coated လိပ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံမျက်နှာများကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးနောက်။ အလှဆင်အပေါ်ယံပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမီနီယံပြားအပေါ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ တံဆိပ်ခတ်အစွန်းထုတ်လုပ်သောနှင့်အထူးပုံဒီဇိုင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည် - သတ်မှတ်ထားတဲ့ရမှတ် (စည်းဝေး), အချိန်စာရင်း။ ကျနော်တို့လူမီနီယံပြား, တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ခွန်အားကိုပေါ့ပါးလူမီနီယံပြားတိုးမြှင့်လုံခြုံရေးကြောင့် uniqueness ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များလည်းကျနော်တို့ရဲ့ပြပွဲထိခိုက်မခံတဲ့ Semi-conductor စင်ကြယ်သောအခန်းပေါင်းနဲ့အနုပညာစီမံကိန်းများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့အလှဆင်လမိုင်းအဘို့အလူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြား outgasing သည်မဟုတ်, သတ္တုအလွှာနှင့်တစ်ဦးအဆင်သင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဗေဒရည်ရွယ်ချက်များချထားတဲ့။ အလှဆင်ဖျင်, veneer နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စံလူမီနီယံသတ္တုအလွှာပြားများအသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြားရိုးရာပစ္စည်းများတဝက်အလေးချိန်ထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည်။
မြို့ရိုးအဘို့, စင်ပေါ်, စားပွဲနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဖြေရှင်းချက်များအမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို။ ပစိဖိတ် Panel များတစ်ဦး thermo epoxy ကော် 3/4 "သို့မဟုတ် 3/8" ဆဲလ်အရွယ်အစားစီးပွားဖြစ်တန်းလူမီနီယမ်ပျားလပို့၏အလေ့အထများနှင့်အတူလမိုင်းသို့မဟုတ်သစ်သား veneer သုံးပြီးလူမီနီယမ်၏အင်အားကြီးနဲ့ Hard ဖွဲ့စည်းပြားတစ်ဦးအနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, သံမဏိကမ်းလှမ်း core ကို။
Yöyke panel ကိုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နှင့်တင်းကျပ်ပျားလပို့ပြားများအတွက် display ကိုအလင်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း။ ဒီပေါ့ပါးပြီး, အားကြီးသောပြားလူမီနီယံအင်္ကျီနှင့်အတူကပ်လျက်တည်ရှိတစ် thermosetting epoxy ကော်စီးပွားဖြစ်တန်းလူမီနီယမ်ပျားလပို့ core ကို၏ရေးစပ်ကြသည်။
အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် Panel များ
Yöykemငါ Panel များ Inc က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပေါ့ပါး, ပိုမိုအားကောင်းထုတ်လုပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြားများနှင့်လူမီနီယမ်ပျားလပို့ core ကိုလူမီနီယမ်အတူတူအားလုံးမျက်နှာတွေကိုခညျြနှောငျမှကော်တစ်အလွှာနှင့်အတူသားညှပ်ပေါင်မုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ High-end သားညှပ်ပေါင်မုပြား၏အဆင့်မြင့်, အလင်းအလေးချိန်, ခိုင်မာသောနှင့်ထူးခြားသော၏ GPP အကျိုးခံစားခွင့်။
ဂရပ်ဖစ် display ကိုပြား
ဗိသုကာအလေ့အကျင့် - ပြည်တွင်းရေးနံရံနဲ့မျက်နှာကြက်ပြား
ဆိုင် fittings, ကျောက်ပြားကို
4'x စံလူမီနီယံပြား 8 4'x 10, နှင့် 4'x 12. မိမိစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား5အထိ "ကျယ်ပြန့်နှင့် 20" ရှည်လျားသို့မဟုတ်4"ကျယ်ပြန့်နဲ့ 30" ရှည်လျားရရှိနိုင်ပါသည်။ စံ panel ကို၏¼အထူ ", ½" 3/4 "1", 1 ¾ "နှင့် 1 7/8" ။ အခြားအထူတောင်းဆိုမှုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရရှိနိုင်လူမီနီယံအလွှာထူ - 0,020, 0,025, 0,032, 0,040, 0,050, 0,063 ။ ရရှိနိုင်ပါကလာပ်စည်းအရွယ်အစား - 1/4 "1/2, 3/8" 3/4 "နှင့် 1" ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိတ်လူမီနီယံပြားများအတွက်စံအရောင်များ, C ကိုစီတန်း, ဝင်ရိုးစွန်းအဖြူ, အဖြူနှင့်အ Shell ကဒီဇိုင်နာ။ အခြားအရောင်များနှင့်ပစ္စည်းများကို Linings volume ကိုနှင့်ခဲအချိန်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးရရှိနိုင်ကြသည်။ ငါတို့အဘို့အအဖြစ်ကျနော်တို့ရရှိနိုင်တဲ့အဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာလူမီနီယံပြား 4'x 8'x ¼ "နှင့် 4'x 10 'x ¼" 0.032 ဝင်ရိုးစွန်းအဖြူလူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြားများနှင့်လူမီနီယမ် veneer များမှာ¾ "ဆဲလ်အရွယ်အစားစီးပွားဖြစ်တန်းလူမီနီယမ် core ကို (ဇယားလူမီနီယမ် spec မြင် ပြား။ ) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သားညှပ်ပေါင်မု panel က, ပြားချပ်ချပ်ပေါ့ပါးတဲ့, ခက်ခဲတဲ့နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးလိုအပ်ကြောင်း application များအတွက်လူမီနီယမ်ပျားလပို့ကိုဖြေရှင်းနည်း။ ထုတ်လုပ်မှုသမိုင်း, အတွေ့အကြုံနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပွိုဂုဏ်သတင်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 18 နှစ်, လူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြားကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
စံ Panel များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံလူမီနီယံပြား 4'x 8 4'x 10, နှင့် 4'x 12. မိမိစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား "ကျယ်ပြန့်နှင့် 20"5အထိရရှိနိုင်ပါသည်ရှည်လျားသို့မဟုတ်4"ကျယ်ပြန့်နဲ့ 30" ရှည်လျား။ စံလူမီနီယမ်၏¼ panel ကိုအထူ ", ½" 1 ", 1 ¾" နှင့် 1 7/8 "။ အခြားအထူတောင်းဆိုမှုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 0.032 (0.025, 0,040, ရရှိနိုင် 0.063) ၏စံလူမီနီယံဝတ်ထူ။ ဒါဟာအဖုံးကိုနိုင် တစ်ဦးရှေ့နှင့်နောက်မျက်နှာများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ဒါမှမဟုတ်အမှုန့်-coated လူမီနီယံအလိပ် finish ကိုအတူ။ မျက်နှာများ nonconductiv သို့မဟုတ် electrostatic လွန်ကျူးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
စံဝင်ရိုးစွန်းအဖြူအရောင်စားဆင်ယင်, ဒီဇိုင်နာအဖြူနှင့်အခွံ။ အခြားအရောင်များကိုဝယ်ယူအ​​ချိန်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်လိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးရရှိနိုင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပေးပို့ကြိမ်လူမီနီယံပြားမဆိုပေါင်းစပ် - 2-3 ပတ်ကြာ ArO- အတွင်းတင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့အဘို့အအဖြစ်ကျနော်တို့ရရှိနိုင်တဲ့အဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာလူမီနီယံပြား 4'x 8'x ¼ "နှင့် 4'x 10 'x ¼" 0.032 ဝင်ရိုးစွန်းအဖြူလူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြားများနှင့်လူမီနီယမ် veneer များမှာ¾ "ဆဲလ်အရွယ်အစားစီးပွားဖြစ်တန်းလူမီနီယမ် core ကို (ဇယားလူမီနီယမ် spec မြင် ပြား) ။
ပစိဖိတ် Panel များ Inc က စတော့ရှယ်ယာ 4'x 8'x ¼ "& 4'x 10x ¼" လူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြား။
စတော့အိတ်လူမီနီယမ် Panel ကိုတပ်ဆင်ထား:
အရေခွံ - 0,032 ထူသောလူမီနီယမ်
အရောင်များ - အရောင်အသွေးစုံဖြူ (တောက်ပြောင် epoxy အင်္ကျီအခန်းကဏ္ဍကို)
ပျားလပို့ - ¾ "ဆဲလ်အရွယ်အစားစီးပွားဖြစ်တန်းလူမီနီယမ်
ကော် - ခိုင်မာ epoxy (မဟုတ်သော outgasing)
ကုန်တင်မိန့်လိုအပ်သည် - 1-2 နေ့ရက်ကာလအဘို့တင်ပို့သေတ္တာ
ဒေသခံအမိန့် (100 မိုင်မက်စ်။ ) - 1-2 ပေးပို့တစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုနေ့, ပစ်ကပ်မခေါ်
Applications ကိုတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ပေါ့ပါးလူမီနီယမ်ပျားလပို့ပြားအမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်ကိုအသုံးပြုပြီးတီထွင်ခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပျားလပို့ panel ကနည်းပညာ applications များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မယ်။
Yöykeငါ Panel များ Inc က လူမီနီယမ်ပျားလပို့ core ကိုအိုးအိမ်မှည့်နိုင်စွမ်း + ဖြတ် - ထူ 0,015 ပျားလပို့ panel ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကျနော်တို့ "x ကို 120" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 60 ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့သုံးပြီး, "က x 240" 60 တိကျစွာရေနံတွင်းတူးထုတ်သယ်ဆောင်ရန်နိုင်စွမ်းရှိ 80 "x 120" CNC Router က။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC router ကိုပင်အရှုပ်ထွေးဆုံးချဲ့ထွင်, ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ရရနျကြှနျုပျတို့၏စွမ်းရည်များအတွက်တိကျလေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ်ကြောင်းအဓိကအားတိကျတဲ့စီမံကိန်းများဖြစ်ပါတယ်။ အိုးဆက်သွယ်မှုများကို, ပေါင်းလိုက်သော INSERT, fixed အချက်များ, extrusion, Pre-ရေနံတွင်းတူးနှင့်အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ panels.day အထူးထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ပျားလပို့ပစ်ကပ်မခေါ်အမျိုးမျိုးရှိကြ၏
စင်ကြယ်သော ROOM တွင် Sandwich က Panel ကို
စင်ကြယ်သော Rook Sandwich က Panel ကို
နှစ်ဦးစလုံးသန့်ရှင်းရေးအခန်း Panel များ
စင်ကြယ်သော ROOM တွင်ပါဝင်
partitions Panel များ
လေယာဉ်ပျံ Panel များ
display ကို panel က
built-in အသံချဲ့စက် panel က
HEPA filter ကိုအိမ်ရာ
1) Partition ခွဲအမှတ်တရ Panelleri- (လေယာဉ်ပျံ)
ဆောက်လုပ်ရေး - စက်ရုံနှစ်ဆအသားအရေသားညှပ်ပေါင်မုပြားထုတ်လုပ်တယ်။
insulator တွင်လည်း - Polyurethane insulator တွင်လည်း
သိပ်သည်းဆ 40 ကီလိုဂရမ် / m3
ဒေါင်းလုပ် - က Man - အမျိုးသမီးဖမ်းဆီးရ။
1200x2400, 1200x3000, 1200x4000 မီလီမီတာ
1200X ဖောက်သည်များကလိုအပ်သည့်အရွယ်အစားသို့မဟုတ်4မီတာအမြင့်ဆုံး။
1B) Partition ခွဲအမှတ်တရ Panelleri- (ပြည်တွင်း Standard)
စကခဆောက်လုပ်ရေး, insulator တွင်လည်း, ပိုက်ပြင် & Size ကို (တူညီ 1A)
ပြည်တွင်း riser ပိုက် (400x 80 600x80) စကခအထုပ် - G - 14 SWG​​ ။
1C) Partition ခွဲအမှတ်တရ Panelleri- (ဟန်ပြ)
Display ရဲ့ဧရိယာကို 900 (W) ၏အရွယ်အစား 900 (H) ဟာ MM ဖန်ခက် x
နှစ်ခုဖန် silica gel ဟာအကြားတစ်ဦးလေဟာနယ်ဖန်တီးရန်။
2) မျက်နှာကျက် panel က -
မျက်နှာကျက်ပြားနှင့်အတူက MS ထပ်ခိုးဘားဆက်စပ်ပစ္စည်း။
(လိုအပ်ပါက) HEPA အဘို့, ချောင်းအလင်းအိမ် & သို့ပြန်သွားသည်ဖြတ်
စကခဆောက်လုပ်ရေး insulator တွင်လည်း (အတူတူပင် 1A)
ပိုမိုနီးကပ်စွာတံခါးကို (Dorma ပြုပါ)
စေ့စေ့စပ်စပ်စတစ်ကာများ5"
တံခါး (10 ") ကိုကိုင်တွယ်
မျှော်စင် Bolt က (နှစ်ချက်တံခါး)
ဟန်ပြ (700 x ကို 500 မီလီမီတာ)
x က 2100 750 (ဇ) မီလီမီတာ
x က 2100 900 (ဇ) မီလီမီတာ
x က 2100 1000 (ဇ) မီလီမီတာ
1200x 2100 (ဇ) မီလီမီတာ
1500x 2100 (ဇ) မီလီမီတာ
4) Pahlar-: လူမီနီယမ် / PVC extruded Cove ။
5) grids - Powder-coated မြင့်မားလိုင်စင်
စင်ကြယ်သောအာဏာကို - 2.0 ကီလိုဂရမ် / cm2
ကွေးအစှမျးသတ်တိ - 2.0 ~ 5.0 ကီလိုဂရမ် / cm2
ဆန့အစှမျးသတ်တိ - 3.0 ~ 5.0 ကီလိုဂရမ် / cm2
အပူချိန်အကွာအဝေး - 0C -196 / 230 0C
စင်ကြယ်သော Panel များ
ကုန်ကျစရိတ်ကားအဘယျက 100 m2 သံမဏိအိမ်ခေါင်မိုး?
အသုံးပြုသည်အဘယ်သို့သံမဏိအိမ်ခေါင်မိုးများတင်ဆောင်လာသောစွမ်းရည် profiles သောသံမဏိခေါင်မိုး?